Midziyo Yemagetsi Vagadziri - China Midziyo yeMagetsi Fekitori & Vatengesi
XSJDL akateedzana euwandu ekudzora chiridzwa anogona kushandira nemhando dzese dzekuyerera maseru uye anotumira kuti aone kuyerwa kwakawanda, kuwanda kwekuzadza, kuwanda kwekubatana, batching, jekiseni remvura yakawanda uye kuwanda kwehuwandu hwemvura dzakasiyana.
Kutonhora Heat Totalizer
XSJRL nhepfenyuro kutonhora kupisa totizer ndiyo microprocessor yakavakirwa, yakazara mabasa, inogona kuyera kuyerera kwemamita neakasiyana kuyerera kwekutepfenyurisa, sensor, uye maviri ebazi platinamu kupisa kupisa (kana kupisa tembiricha) pamwe nekupedzwa kwemvura inotonhora kana kupisa metering.
Diesel injini yekushandisa peturu mita ndeyekusika kubva kune maviri Diziri kuyerera sensor uye imwe peturu karukureta, chiyero chemafuta chiyereso uye kuverenga ese maviri emagetsi inoyerera sensor mafuta qty, mafuta anopfuura nguva uye peturu yekushandisa zvakare peturu karukureta sarudzo inogona kupa RS-485 / RS-232 / kupomba kwakabuda kupesana nekugadzirisa shandisa qty yekubatanidza neGPS neGEMS modem.
Chigadzirwa Pfupiso Iyo vhoriyamu corrector inonyanya kushandiswa kuona iyo tembiricha, kumanikidza, kuyerera uye zvimwe zviratidzo zvegasi online. Inoitawo otomatiki kururamisa kweye compression factor uye otomatiki kururamisa kuyerera, uye inoshandura vhoriyamu yekushanda mamiriro kuita vhoriyamu yeyakajairika mamiriro. ZVIMWE 1.When system module iri mukukanganisa, inozokonzeresa iko kukanganisa kwemukati uye kutanga inoenderana nzira. 2.Prompt / alarm / rekodhi uye tanga inoenderana mech ...
XSJ dzakatevedzana kuyerera totizer maererano tembiricha, kumanikidza uye kuyerera mwero dzakasiyana chiratidzo kutora, kuratidza, kutonga, kutapurirana, kutaurirana, kudhinda kugadzira, dhijitari yekuwana kutonga system. Nezve gasi, mhute, mvura yakazara, kuyerwa uye kutonga.